selminaz.com - blog, akụkọ
blog, ozi ọma
Ihe na 2021-05-26 Akwụsịla anu ulo
Nri maka cichlids: ụdị, ọnụọgụ nri na ụzọ
by wpHapụ ikwu na nri maka cichlids: ụdị, nọmba nke feedings na ụzọ
Ka anyi bido n’oge obi ojoo. Ọ ka mma ka onye mbido zere ite cichlid. N'ihi gịnị? N'ihi na azụ ndị a chọrọ nnukwu akwụkwọ aquarium ahụ, ha na-eme ihe ike ike, na-esiri ike ilekọta. Na ọtụtụ ihe - nri cichlids. Ọ dị mfe ịzụta ya, mana maka ebumnuche nke nke a ...
Etu ịhọrọ akwa akwarium: njirisi, nzacha, compressors, ala, ndụmọdụ maka ndị mbido
by wpHapụ ikwu na Otu esi ahọrọ akwarium: njirisi, nzacha, compres, ala, ndụmọdụ maka ndị mbido
Họrọ akwarium mbụ gị adịghị mfe. N’ezie, ọnọdụ azụ̀ a n’ozuzu ha, ọdịmma ha na ma ha ga-amụ ụmụ na-adabere n’otú e si ahọrọ arịa ahụ n’onwe ya na ihe nile dị mkpa maka ya.
Isiokwu a ga - enye aro maka ...
Ihe na 2021-05-26 Ngwa
Kachasị katọn. Nkọwa, ụdị, uru
by wpHapụ ikwu na kaadiboodu Laminated. Nkọwa, ụdị, uru
Industrylọ ọrụ na-arụ ọrụ akwụkwọ akụkọ na-emeziwanye nkà na ụzụ ya mgbe nile, na-ahapụ ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ. Ngwaahịa ndị a gụnyere laminated board, nke nwere ọnọdụ siri ike n'ahịa.
Kaadị laminated bụ ụdị ihe eji kpuchie ya na akwa pụrụ iche nke na-eme ka mma ya dị elu.
Nhazi otutu ...
Gini mere nwamba ji lie nri: ihe puru ime na otu esi wepu
by wpHapụ ikwu on Kedu ihe kpatara nwamba ji lie nri: ihe kpatara ya na otu esi wepu ya
Kedu ihe kpatara nwamba ji lie nri? Ajụjụ a bụ ihe iju anya, ebe ọ bụ na nkịta ka a na-ahụkarị omume a. Mana, dị ka omume na-egosi, ụfọdụ nwamba ma ọ bụ nwamba na-anwa ọ bụghị naanị ili nri ha, kamakwa zoo otu nnukwu efere. Omume dị otú a na-enweghị atụ n'ụlọ ...
Ihe na 2021-05-26 ememe
Kedu ekele Svetlana na ncheta afọ ya nwere ike ịbụ?
by wpHapụ ikwu on Kedu ụdị ekele Svetlana na ncheta afọ ya?
Na-achọ mgbe niile ịkele nwanyị na ezumike ezumike n'ụzọ dị mma ma dị mma, ọkachasị mgbe ọ na-eme ncheta. Kedu ihe nwere ike ịbụ nke mbụ karịa iji aha ya na-egwu ihe ederede nke ozi ekele ahụ? Ederede edepụtara site na iji aha ga-eme ka enweghị obi abụọ banyere ịche ekele ma ...
Ihe na 2021-05-26 Ịgba afọ
Cervix dị nro n'oge afọ ime: gịnị ka ọ pụtara?
by wpHapụ ikwu on Soft cervix n'oge afọ ime: gịnị ka ọ pụtara?
N'ime afọ ime, akụkụ nwanyị na-enwe nnukwu mgbanwe. N'oge a, ndị dọkịta na-eji nlezianya enyocha ọnọdụ nke nne na-atụ ime. A na-enyocha nyocha gynecological abụọ ruo ugboro atọ n'oge afọ ime dum, ma ọ bụrụhaala na enweghị ọrịa. Eriri akpa nwa amaghi nsogbu ozo, nihi na o dinakwasi ya ...
Ihe na 2021-05-26 ụmụ
Ọbara ọbara na nsị na ụmụ ọhụrụ: ihe kpatara ya, ihe mgbaàmà na-eso ya, ọgwụgwọ, ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọkachamara n'ọrịa ụmụaka
by wpHapụ ikwu on Ọbara streaks na nsị na ụmụ ọhụrụ: ihe kpatara ya, ihe mgbaàmà na-eso ya, ọgwụgwọ, ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọkachamara n'ọrịa ụmụaka
Mama ọ bụla nwere ahụmahụ maara ihe ọ kwesịrị ịbụ stool na nwata. Ọ bụrụ na, mgbe ị na-agbanwe metụ akwa, enwere mgbanwe na agba nke nsị ma ọ bụ ọnụnọ nke ọbara ọbara, nke a kwesịrị ime ka ndị nne na nna mara. Ihe mgbaàmà dị otú a anaghị egosipụtakarị ọrịa dị egwu, mana ọ ka mma ọ bụghị ...
Diaper cream "Mustela": nyocha nke ndị nne
by wpHapụ ikwu na ude diaper "Mustela": nyocha nke ndị nne
Taa, nlekọta nwa na-agụnye mgbe nile iji akwa akwa. Ọ ga-adị ka mgbanwe ndị a kwesịrị ime ka ndụ dịrị ndị nne na nna mfe. Agbanyeghị, akwa nhicha na-eme ka ụmụ ọhụrụ na-eme ihe nfụkasị ahụ na nfụkasị ahụ Nke a na-amanye ndị nne na nna iji nlezianya họrọ ude diaper. Na nke a…
Mkpụrụ HCG site na ụbọchị mgbe akụrụ: atụmatụ, ụkpụrụ na ndụmọdụ
by wpHapụ ikwu on HCG ibu site ụbọchị mgbe nkunye: atụmatụ, ụkpụrụ na-atụ aro
Womenmụ nwanyị na-achọ ịtụrụ ime maara nke ọma ihe gonadotropin chorionic (hCG ma ọ bụ hCG) bụ. A na - amalite imepụta hormone a ozugbo ịtụrụ ime nke ọma. Mmekọrịta HCG site na ụbọchị mgbe nkunye na-enye gị ohere nyochaa usoro afọ ime.
A na-emepụta hormone ahụ site na anụ ahụ nke usoro embryological. Ọkwa ya ...
Clinlọ ọgwụ anụmanụ “Big Dipper” na Izhevsk. Nkọwa, nyocha
by wpHapụ ikwu na ụlọ ọgwụ anụmanụ "Big Dipper" na Izhevsk. Nkọwa, nyocha
Chohọrọ ụlọ ọgwụ na dọkịta maka anụ ụlọ ya, onye nwe ya na-ahụ n'anya furu efu n'ọtụtụ ọrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. Isi njirisi nhọrọ bụ: ọrụ dị elu, ọkachamara na ọnụ ahịa ezi uche. Nhọrọ a na-ezighị ezi nwere ike ime ka ndụ anụmanụ na ahụike ya. Nyocha banyere ụlọ ọgwụ anụmanụ “Nnukwu ...
"Ike" maka nkịta: nyocha, ntuziaka maka ojiji, usoro onunu ogwu
by wpHapụ ikwu na "Ike" maka nkịta: nyocha, ntuziaka maka ojiji, usoro onunu ogwu
Ndị nwere nkịta na-ege ntị nke ọma na-anwa ime ka ndụ nke anụ ụlọ ha hụrụ n'anya dị ogologo ma nwee nkasi obi dị ka o kwere mee. Mana ọ bụkarịrị ka ụmụ anụmanụ na-ebute ọrịa dị iche iche site n'oge ruo n'oge na mgbe ha na anụ ụlọ ndị ọzọ na-akpakọrịta. Ntufu "Onye siri ike" maara ọtụtụ ndị nwe ha, ha na-adụkarị ọdụ ka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ. ...
Snot na nwa onwa onwa: kedu ka imere?
by wpHapụ ikwu na Snot n'ime otu ọnwa ọhụrụ: ihe ị ga-eme?
Nne ọ bụla na-ahụ n'anya na-elekọta nwa ya mgbe niile ma na-anwa ichebe ya pụọ ​​na nsogbu na nsogbu niile. Agbanyeghị, ọ naghị ekwe omume mgbe niile ichebe nwatakịrị ahụ pụọ na nje, ọrịa na ihe ndị na-akpata ọrịa. Ọtụtụ mgbe nwatakịrị ahụ na-amalite snot. Echiche mbụ na-ebilite na ndị nne na-eto eto: ...
Nwanyị dị ime ole n'arọ ka nwanyi nwere ime ga - ebuli: aro
by wpHapụ ikwu on Olee otú ọtụtụ kilogram nwanyị dị ime nwere ike ibuli: aro
N'ime afọ ime, nwanyị kwesịrị icheta ọ bụghị naanị maka onwe ya, kamakwa banyere nwa ọhụrụ ya bi n'ime ya. Ọ bụ ya mere ụfọdụ mgbochi ji pụta na ndụ, a ghaghị iburu n'uche ha. Ka anyi choo ka arara kedu nwa nwanyi di ime gha ebuli na ka esi eme ya nke oma ...
IVF insemination na Tula: atụmatụ, ọrụ na nyocha
by wpHapụ ikwu na IVF insemination na Tula: atụmatụ, ọrụ na nyocha
In vitro fatịlaịza, ma ọ bụ, dịka a na-akpọ ya, IVF, bụ njikọta akwa, nke a na-eme n’èzí ahụ nwanyị. Taa ọ bụ ụzọ kachasị dị irè maka imeri infertility na ụwa.
Ekele maka nrụpụta dị elu na usoro na-aga n'ihu, yana ngwa ọrụ ọgbara ọhụụ, ọ bịara kwe omume ịme usoro a ...
Lọ akwụkwọ ọta akara "Goldfish", Kazan: adreesị na nyocha
by wpHapụ ikwu na ụlọ akwụkwọ ọta akara "Goldfish", Kazan: adreesị na nyocha
N'oge na-adịghị anya, n'ime ezinụlọ ọ bụla ebe ụmụaka nọ, ihe omume dị mkpa maka ndị nne na nna na nwatakịrị na-eme - na-abanye ụlọ akwụkwọ ọta akara. N'ebe a, ọtụtụ ajụjụ bilitere ozugbo: afọ ole ka ị kwesịrị inye nwa gị, ọ kaghị mma ịhapụ ya ...
Enwere ike ikpo mmiri ara ehi na ngwa ndakwa nri: usoro, ndụmọdụ, nyocha
by wpHapụ ikwu na Ọ ga - ekwe omume ịmị mmiri ara ehi na microwave: usoro, ndụmọdụ, nyocha
O nweghị nne chọrọ inye nwa ya nri oyi. Ya mere, ngwa ndakwa nri microwave na-abịa napụta. Ofe, efere dị n'akụkụ, anụ na nri ndị ọzọ dị njikere na-ewe iwe na ya. Agbanyeghị, enwere ike iwe mmiri ara ehi na ngwa ndakwa nri? E kwuwerị, site na mgbe ochie, ọ dị ọkụ na stovu ...
Ọ ga - ekwe omume ịme nku nku anya maka ụmụ nwanyị dị ime: ndụmọdụ ndị ọkachamara
by wpHapụ ikwu na Ọ ga - ekwe omume ịme nku nku anya maka ụmụ nwanyị dị ime: ndụmọdụ ọkachamara
Nwanyị na-achọ mgbe niile ịdị mma n'anya, ọkachasị n'oge ime ime. Ọtụtụ ụmụ nwanyị anaghị enwe mmasị n'ọdịdị na-agbanwe ha ngwa ngwa, ọdịdị gbara gburugburu na ọnọdụ anụ ahụ. Ọtụtụ mgbe, nke a bụ n'ihi mmachibido iwu nke ndị dọkịta na usoro a na-emebu, mgbagha nke ya bụ ihe na-atọ ụtọ ...
Ntorobịa 110: afọ ole ka ọ kwesịrị maka?
by wpHapụ ikwu na Nha nwata 110, afọ ole ka o kwesịrị maka?
Mgbe ị na-azụrụ uwe maka nwa ha, ndị nne na nna n'oge na-adịghị anya na-eche ihu ịchọpụta etu ihe hà. Ọ bụrụ n 'ọ bụ nwata ihe niile dị mfe: tụọ ogo nwatakịrị ahụ ma ọ bụ kpọọ aha afọ - ndị na-ere ahịa ga-ahọrọ nhọrọ dabara adaba, mgbe ahụ ka nwata ahụ toro, ọ ga-esiri ya ike ịchọpụta ...
Usoro ọgwụgwọ maka mgbatị n’oge ime ime: nyocha. Ogo nke ọgwụgwọ kacha mma maka mgbatị
by wpHapụ ikwu na Ngwọta maka mgbatị n'oge ime ime: nyocha. Ogo nke ọgwụgwọ kacha mma maka mgbatị
Oge ime nwa na - esonyere ya na otutu mgbanwe n’ime aru nwanyi. A na-emezigharị ahụ dị ukwuu, nke pụtara na e nwekwara ụfọdụ mgbanwe n'ọdịdị. Nsogbu nke ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eche ihu mgbe ha na-amụ nwa bụ ịgbatị akara. Maka ụfọdụ, ha na-egosipụta onwe ha nke ọma, maka ndị ọzọ ...
Ọnọdụ nke ụmụaka: nhazi, atụmatụ, njirimara
by wpHapụ ikwu na Omume ụmụaka: nhazi, njirimara, njirimara
Childrenmụaka niile na-etolite dịka mmemme nke otu onye ma ha dịkarịrị ka ibe ha. Otu na-etolite jụụ ma na-enyere ya aka, onye nke ọzọ na-ekwenye ekwenye, nke atọ bụ onye ekwuru na ọ bụ "mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ", nke anọ na-enwekwa ntụsara ahụ naanị ya. Ọbụna ụmụ ejima dị iche n'omume ha, ...
Silicone griiz na fluoroplastic "MS Sport": nzube, mejupụtara, njirimara
by wpHapụ ikwu na griiz nke Silicone na fluoroplastic "MS Sport": nzube, ihe mejupụtara, njirimara
A na-ere ndị na-ete silicone na ahịa ụlọ nke oge a n'ọtụtụ dịgasị iche. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ, ma ndị Russia ma ndị mba ọzọ, na-etinye aka na ịhapụ ụdị ego a. Dịka ọmụmaatụ, ezigbo nyocha sitere n'aka ndị na-azụ ahịa kwesịrị ka abụba griiz nke MS Sport na fluoroplastic kwesịrị.
Napụta a ...
Ngwunye Teflon na-abụghị osisi - atụmatụ ngwa, uru
by wpHapụ ikwu on Non-osisi Teflon ute - Ngwa Atụmatụ, Uru
Nwanyị ọ bụla na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ ya chere ọnọdụ ihu mgbe, mgbe ị na-eme achịcha, dịka ọmụmaatụ, apụl apụl, enwere nsogbu na iwepụ efere emechara site na ebu ahụ. Ugbu a nsogbu a dị mfe idozi. Ihe pụrụ iche na-abụghị osisi ga-abịa nnapụta ...
Etu esi ebulite onye mmeri, ma obu gini bu ngalaba?
by wpHapụ ikwu na Kedu ka esi eto eto eto, ma obu gini bu ngalaba?
Kedu ihe na - emetụta nguzobe nke iduzi nwata? Kedu ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ga-akụziri gị ka ị merie n'ihe niile? Ndị nkuzi ọ nwere mmasị n’ozi ụmụaka na-agagharị na ngalaba na-anọghị n’ụlọ akwụkwọ? Azịza ya dị mfe karịa ka ọ na-ekwenyekarị.
Willnye ga - enyere aka na nhọrọ?
Ihe a ga-eme ...
Mee N'onwe Gị bilie isi
by wpHapụ ikwu na Mee N'onwe Gị bilie isi
Uwe a mara mma ma sie ike, nke ejiri Roses chọọ, ga-eme ka nwanyị nwee ịhụnanya karịa. Na klas nnabata dị n'okpuru, anyị ga-egosi gị otu esi eme ụdị ọla a. DIY bilie isi na-adị mfe ịme. Ejiri 19 Roses chọọ braid ahụ na satin ...
Otu esi emeziwanye akwa nke akwa tupu IVF: usoro di irè na aro
by wpHapụ ikwu na Otu esi emeziwanye akwa nke akwa tupu IVF: ụzọ dị mma na aro
Site na mmepe nke teknụzụ ọmụmụ, ọtụtụ mmadụ na-enweta ohere iji bụrụ nne na nna. IVF bụ otu n'ime usoro ndị kachasị ewu ewu ma dị irè. Ma ọbụna na vitro Fertilization adịghị enye mgbe niile ihe achọrọ. Ihe kpatara nke a bụ obere àgwà nke ndu ihe - akwa. Ya kpatara …
Ohiri isi azu: maka izu ike, egwu na enyemaka nchekasị
by wpHapụ ikwu na Original azụ ohiri isi: maka ntụrụndụ, igwu egwu na nrụgide enyemaka
Ndị oge, na ọkachasị ndị obodo, nọ na esemokwu oge niile. N’ịbụ ndị a manyere idozi nsogbu ndị a na-enwe kwa ụbọchị, chee echiche banyere ihe isi ike dị n’ime ezinụlọ na n’ebe ọrụ, ha na-emikpu onwe ha n’ime usoro ọrụ nke ime dị nzuzu. Azu ohiri isi-egwuri egwu na-adọrọ adọrọ ga-enyere aka mee ka ọnọdụ ahụ na-akpata nchekasị dị mma ma chọọ ime ahụ mma: ka o kwere mee ...
Redophead geophagus: aha, nkọwa ya na foto, ozuzu, njirimara mmezi, iwu nlekọta na nri
by wpHapụ ikwu na geophagus Red -head: aha, nkọwa na foto, ozuzu, njirimara mmezi, iwu nlekọta na nri
Ọ bụghị ọmarịcha mmiri niile maara banyere ụdị azụ dị ka geophagus na-acha uhie uhie. Ọfọn, ndị mbido nke nwetara obere akwarium na nso nso a ma na-enwe mmasị na naanị guppies kachasị mma, mma agha na ndị na-anụbeghị anụbeghị banyere ya. Ma nke a mara ezigbo mma ma na-adọrọ mmasị ...
Mezie cassette: nkọwa, foto, akụkụ, nzube na ụkpụrụ nke ọrụ
by wpHapụ ikwu na kaseti teepu: nkọwa, foto, akụkụ, ebumnuche na ụkpụrụ ọrụ
Mgbe ọbịbịa nke ihe ndekọ ederede dijitalụ, teepu teepu, dị ka ndị ikwu ya (floppy diski nwere vinyl records), n'oge na-adịghị anya ghọrọ foto dị mma, ebe ọ funahụrụ ihe ọ pụtara. Ka anyị ghara ịde ya ma chọpụta ihe e ji mee ya na otu o si dị ...
Hospitalslọ ọgwụ na-amụ nwa kachasị mma na Ufa na 2018
by wpHapụ ikwu na hospitalslọ ọgwụ kachasị mma na-amụ nwa na Ufa na 2018
Ofbọchị amụrụ nwatakịrị bụ oge na-akpali akpali ma na-emetụ n'ahụ na ndụ ezinụlọ ọ bụla. Ọ bụ ya mere nne ndị na-atụ ime ji na-atụ ụjọ ịhọrọ ụlọ ọgwụ ga na-amụ nwa dị ime. Enwere ike ịkwado nhọrọ nke ndị nne na nna n'ọdịnihu maka ọkwa, nke depụtara ụlọ ọgwụ kachasị mma na-amụ nwa na Ufa, adreesị nke ngalaba na ọnọdụ ...
Igwe ekwentị magnetik: nkọwa na njirimara
by wpHapụ ikwu na ugwu ekwentị Magnetic: nkọwa na atụmatụ
Mbugharị bụ okwu bụ isi maka ndị mmadụ na XNUMXst narị afọ. Mụ amaala na-enwe ọ usingụ n'iji ụgbọ ala nke onwe na ọtụtụ ngwaọrụ, yana ekwentị nwere ike ịchekwa ndụ ya niile! Ọ bụ naanị na mgbe ị na-anya ụgbọ ala, ikiri vidiyo na-atọ ọchị ma ọ bụ na-achọ egwu kachasị amasị gị ka amachibidoro iwu: aka dị mkpa iji ...
Page 1 Page 2 ... Page 675 Next Page
Okwu Amphibious site Akpa Template ⋅ Kwadoro site na WordPress